အနောက်ရှားနယ် - ဝီကီပီးဒီးယား
အနောက်ရှားနယ် (သို) ရှီရှားနယ် ( တရုတ်: 西夏 )ကို တန်ဂုအင်ပါယာအဖြစ် မွန်ဂိုများနှင့် တန်ဂုလူမျိုး တို့ကမှတ်ယူကြသည်။ တိဘတ်တို့က တန်ဂုတို့ကို မိညာဂ်ဟုခေါ်ကြသည်။  တရုတ်ပြည် အနောက်မြောက်ပိုင်းတွင် တန်ဂုအင်ပါယာအဖြစ်တည်ရှိခဲ့ပြီးထိုအင်ပါယာတွင် ၁၀၃၈ခုနှစ်မှ ၁၂၂၇ခုနှစ်အထိပါဝင်သည့်နယ်မြေများမှာ ယနေ့ခေတ် တရုတ်ပြည်ရှိ နယ်မြေများတွင် Ningxia, Gansu ကွင်ဟိုင်း အရှေ့ပိုင်း၊ ရှန်စီ မြောက်ပိုင်း၊ ရှင်ဂျန် အရှေ့မြောက်ပိုင်း၊ အတွင်းပိုင်းမွန်ဂိုလီးယား အနောက်တောင်ဘက်နှင့် မွန်ဂိုလီးယား တောင်ဘက်စွန်ထိစုစုပေါင်းတိုင်းတာလျှင် အကျယ်မှာ ၈၀၀,၀၀၀ စတုရန်း ကီလိုမီတာ (၃၁၀,၀၀၀ စတုရန်းမိုင်) ရှိပါသည်။    ထိုဒေသ၏ မြို့တော်မှာ ရှီချင် (ခေတ်သစ် Yinchuan ) ထိုဒေသကို မွန်ဂို မကျူးကျော်ခင် ၁၂၂၇ ခုနှစ်အထိ မပျက်မစီးတည်ရှိခဲ့ပါသည်။ မကျူးကျော်ခင်အထိ ထိုသူတို့ ရေးသားချက်များနှင့်ဗိသု တည်ရှိခဲ့ပါပြီး အများစုမှာ ဖျက်ဆီးခြင်းခံခဲ့ရပြီး ၂၀ရာစု တရုတ်ပြည်တည်ထောင်ပြီးကာစကာလရောက်ရှိလာချိန်တွင် တရုတ်ပြည်အနောက်ပိုင်းတွင် ထိုအင်ပါယာကိုတည်ထောင်ခဲ့သူများနှင့်သမိုင်းမှတ်တမ်းများကို မရှာဖွေနိုင်ကြတော့ပေ။
၁၂၂၆ ခုနှစ်ဩဂုတ်လတွင်မွန်ဂိုတပ်များသည်အနောက်မြောက် Xia အင်ပါယာ၏ဒုတိယအကြီးဆုံးမြို့ဖြစ်သော ၀ ီဝေ သို့ချဉ်းကပ်ကာဖျက်ဆီးခြင်းမှလွတ်မြောက်ရန်ခုခံခြင်းမရှိဘဲလက်နက်ချခဲ့သည်။  ဤအချိန်တွင် ianကရာဇ် Xianzong ကွယ်လွန်သွားပြီးနောက်သူ၏ဆွေမျိုး Westernကရာဇ်အနောက်ရှိ Xia မှ မိုဇူ သည်မွန်ဂိုတို့၏ကျူးကျော်မှုကိုကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းခဲ့သည်။ ၁၂၂၆ ဆောင်း ဦး ရာသီတွင် Genghis Liang စီရင်စု ကိုယူပြီး Helan တောင်တန်းများ ကိုဖြတ်ကျော်ခဲ့သည်။ နိုဝင်ဘာလတွင် Yinchuan မှကီလိုမီတာ ၃၀ သာဝေးသော Lingwu သို့ဝိုင်းရံခဲ့သည်။   ဒီနေရာမှာ မြစ်ဝါတိုက်ပွဲမှာ မွန်ဂိုတွေဟာအနောက် Xia စစ်သား ၃၀၀၀၀၀ ကိုဖျက်ဆီးခဲ့ပြီးသူတို့ကိုဆန့်ကျင်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်။ 
Genghis, 1227 ခုနှစ်တွင်မြို့ကိုဝိုင်းထား Yinchuan ရောက်ရှိနေပြီနှင့်တဦးတည်းအင်အားစုအဖြစ်ဝေးသောအဖြစ်ရောက်ရှိအတူအနောက်တိုင်း Xia မှစစ်ကူပို့ခြင်းမှသူတို့ကိုကာကွယ်တားဆီးဖို့ Jin ကသို့အကြိမ်ကြိမ်ထိုးစစ်များစတင် Kaifeng, အ Jin ကမြို့တော်။  Yinchuan သည်ခြောက်လခန့်ဝိုင်းရံပိတ်ဆို့ခံရပြီးနောက် Genghis သည်negotiationsကရာဇ်မင်းအားလျှို့ဝှက်စွာသတ်ဖြတ်ရန်ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့်ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးပွဲများစတင်ခဲ့သည်။  ငြိမ်းချမ်းရေးစေ့စပ်ညှိနှိုင်းမှုကာလအတွင်းဂင်းသည် Guyuan အနီးရှိ Liupan တောင်တန်းများတ လျှောက်စစ်ဆင်ရေးများကိုဆက်လက်ပြုလုပ်ခဲ့ပြီး Jin ထံမှငြိမ်းချမ်းရေးကမ်းလှမ်းချက်ကိုငြင်းပယ်ခဲ့ပြီး Song နှင့်နယ်စပ်အနီးတွင်ကျူးကျော်ရန်ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။   သို့သော်ဩဂုတ်လ ၁၂၂၇ တွင်ဂင်ဟစ်သည်သမိုင်းကြောင်းအရမသေချာမရေရာသောအကြောင်းကြောင့်သေဆုံးခဲ့ပြီးဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေသောမဲဆွယ်စည်းရုံးရေးကိုမထိခိုက်စေရန်သူ၏သေဆုံးမှုကိုလျှို့ဝှက်ထားခဲ့သည်။   စက်တင်ဘာ ၁၂၂၇ တွင်Mozကရာဇ်မိုဂျူးသည်မွန်ဂိုတို့လက်သို့လက်နက်ချခဲ့ပြီးချက်ချင်းကွပ်မျက်ခဲ့သည်။  ထို့နောက်မွန်ဂိုတို့သည် Yinchuan ကိုလုယူခဲ့သည်၊ လူ ဦး ရေကိုသတ်ဖြတ်သည်၊ အနောက်ဘက်ရှိtombကရာဇ်သင်္ချိုင်းများကိုလုယူပြီးအနောက် Xia ပြည်နယ်အားထိရောက်စွာဖျက်ဆီးပစ်ခဲ့သည်။   
ဒုတိယမဲဆွယ်စည်းရုံးရေးကာလအတွင်းအနောက် Xia ကိုဖျက်ဆီးခြင်းသည်လုံးဝနီးပါးဖြစ်ခဲ့သည်။ John Man ၏အဆိုအရအနောက် Xia သည် Genghis Khan ၏မူဝါဒအပြည့်အစုံကြောင့်ထိုနယ်ပယ်မှကျွမ်းကျင်သူများ မှလွဲ၍ မည်သူတစ် ဦး တစ်ယောက်မျှမသိရှိပါ။ သူက "ဒါဟာ လူမျိုးတုံးသတ်ဖြတ်မှုကို ပထမဆုံးအကြိမ်မှတ်တမ်းတင်ခဲ့တဲ့ဥပမာဖြစ်တယ်လို့ပြောနိုင်တယ်။ ဒါဟာဆက်ဆက်အလွန်အောင်မြင်သောခဲ့ မည်ဆိုလျှင် ။ "  သို့သော်အနောက်တိုင်း Xia တော်ဝင်မျိုးနွယ်စုအချို့အဖွဲ့ဝင်များသည်အနောက်တိုင်းမှပြောင်းရွှေ့အခြေချ စီချွမ် မြောက်ပိုင်း တိဘက် ပင်ဖြစ်နိုင်သည် အရှေ့မြောက်အိန္ဒိယ ဒေသခံအစိုးရသောမင်းတို့ဖြစ်လာတချို့ဖြစ်ရပ်အတွက်။  Yalong မြစ် ၏အထက်ပိုင်းတစ်လျှောက်တွင်တိဘက်၌ Western Xia ပြည်နယ်ငယ်လေးကိုတည်ထောင်ခဲ့ပြီးအခြားအနောက်နိုင်ငံများသည်ယခုခေတ် Henan နှင့် Hebei ပြည်နယ်များကိုအခြေချနေထိုင်ခဲ့ကြသည်။  တရုတ်ပြည်တွင်အနောက် Xia မှအကြွင်းအကျန်များသည် မင်းဆက် အလယ်၌ဆက်ရှိနေသည်။  
တိုင်းပြည်သည်ဖွံဖြိုးလာသည့်အခါ၌ ယခုအခါမျိုးသုဉ်းပျောက်ကွယ်နေသော တိဘက် - ဗမာဘာသာစကား ဖြစ်သည့် ၎င်းတို့၏ တန်ဂုဘာသာစကားကို ရေးသားရန် ကိုယ်ပိုင် တန်ဂုအက္ခရာ ကိုတီထွင်ခဲ့ကြသည်။  
နိုင်ငံတော်၏စီးပွားရေးသည်အဓိကအားဖြင့်လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေး၊ သင်းအုပ်ဆရာနှင့်ကုန်သွယ်ရေး (အထူးသဖြင့်အာရှအလယ်ပိုင်းနှင့်) ဖြစ်သည်။  
အနောက်ရှားနယ် ရှိ တန္တရစ်ဗုဒ္ဓဘာသာ ထုံးတမ်းစဉ်လာများသည်လိင်မှုဆိုင်ရာထုံးတမ်းဓလေ့များပျံ့နှံ့စေခဲ့သည်။ သူတို့သည်အသက် ၃၀ အရွယ်သို့ရောက်ရှိသောအမျိုးသားများနှင့်လက်ထပ်ခြင်းမပြုမီ ၁၂ ရာစုရှိ ရှန်ရှီ အွီဂါးရ်အမျိုးသမီးများသည်ဟန်တရုတ်အမျိုးသားများနှင့် လက်ထပ်ပြီးနောက်ကလေးများစွာ ရရှိခဲ့ကြသည်။ သူမသည် တရုတ်လင်ယောက်ျားများ၏ ဇနီးအဖြစ်ခံယူကြပြီး နောက်၌ တရားဝင်ဇနီးဖြစ်လာကြသည်။   
၁၂ရာစု၊ အနောက်ရှားမင်းဆက်လက်ထက်၊ ရွှံ့စေးဖြင့်ပြုလုပ်ထားသည် ဗုဒ္ဓ ဦးခေါင်းတော်
အနောက် Xia မင်းဆက်၏မီးခိုးရောင်အိုးဖြင့်ပြုလုပ်ထားသောတောင်ပံ kalavinka
Tangut ဦး ဆောင်သောအနောက် Xia မင်းဆက်မှတရုတ်လူမျိုး Gansu ၏ Yulin Caves မှဗုဒ္ဓဘာသာ manjusri ၏ပန်းချီကားတစ်ချပ်
Ningxia ရှိ Western Xia imperကရာဇ်သင်္ချိုင်းဂူအမှတ် ၃
↑ ၂.၀ ၂.၁ Stein (1972), pp. 70–71.
↑ Man၊ John (2004)။ Genghis Khan: Life, Death, and Resurrection။ New York City: St. Martin's Press။ p. 213။ ISBN 9780312366247။
↑ Man၊ John (2004)။ Genghis Khan: Life, Death, and Resurrection။ New York City: St. Martin's Press။ p. 214။ ISBN 9780312366247။
↑ A Global Chronology of Conflict: From the Ancient World to the Modern Middle East: From the Ancient World to the Modern Middle East။ Santa Barbara, California: ABC-CLIO။ 2010။ p. 276။ ISBN 978-1851096725။
↑ de Hartog၊ Leo (2004)။ Genghis Khan: Conqueror of the World။ New York City: I.B. Tauris။ p. 135။ ISBN 1860649726။
↑ Man၊ John (2004)။ Genghis Khan: Life, Death, and Resurrection။ New York City: St. Martin's Press။ p. 219။ ISBN 9780312366247။
↑ Man၊ John (2004)။ Genghis Khan: Life, Death, and Resurrection။ New York City: St. Martin's Press။ ISBN 9780312366247။
↑ de Hartog၊ Leo (2004)။ Genghis Khan: Conqueror of the World။ New York City: I.B. Tauris။ p. 137။ ISBN 1860649726။
↑ Lange၊ Brenda (2003)။ Genghis Khan။ New York City: Infobase Publishing။ p. 71။ ISBN 9780791072226။
↑ Man၊ John (2004)။ Genghis Khan: Life, Death, and Resurrection။ New York City: St. Martin's Press။ p. 238။ ISBN 9780312366247။
↑ Sinor၊ D. (1998)။ The Uighurs, the Kyrgyz and the Tangut (Eighth to the Thirteenth Century)။ Paris: UNESCO။ p. 214။ ISBN 9231034677။
↑ Ebrey၊ Patricia Buckley (2012)။ East Asia: A Cultural, Social, and Political History။ Stamford, Connecticut: Cengage Learning။ p. 199။ ISBN 9781133606475။
↑ Mote၊ Frederick W. (1999)။ Imperial China: 900-1800။ Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press။ p. 256။ ISBN 0674012127။
↑ The Territories of the People's Republic of China။ London: Europa Publications။ 2002။ p. 215။ ISBN 9780203403112။
↑ Man၊ John (2004)။ Genghis Khan: Life, Death, and Resurrection။ New York City: St. Martin's Press။ pp. 116–117။ ISBN 9780312366247။
↑ Mote 1999, pg. 256
↑ Mote၊ Frederick W. (1999)။ Imperial China: 900-1800။ Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press။ pp. 256–257။ ISBN 0674012127။
↑ Frederick W. Mote (2003)။ Imperial China 900-1800။ Harvard University Press။ pp. 256–7။ ISBN 978-0-674-01212-7။
↑ China: A Cultural and Historical Dictionary။ London: Curzon Press။ 1998။ p. 351။ ISBN 0-7007-0439-6။
↑ Rossabi၊ Morris (2014)။ A History of China။ Wiley-Blackwell။ p. 195။ ISBN 978-1-57718-113-2။
↑ Michal Biran။ The Empire of the Qara Khitai in Eurasian History: Between China and the Islamic World။ Cambridge University Press။ pp. 164–။ ISBN 978-0-521-84226-6။
↑ Dunnell၊ Ruth W. (1983)။ Tanguts and the Tangut State of Ta Hsia။ Princeton University။ , page 228
↑ 洪၊ 皓။ 松漠紀聞။
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=အနောက်ရှားနယ်&oldid=683494" မှ ရယူရန်
၁၂ စက်တင်ဘာ ၂၀၂၁၊ ၀၅:၅၆ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး တည်းဖြတ်ခဲ့သည်။
ဤစာမျက်နှာကို ၁၂ စက်တင်ဘာ ၂၀၂၁၊ ၀၅:၅၆ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။